Asus Eee PC T101MT Multitouch | Avy amin'ny Linux
Ny orinasan'ny solosaina sy ny teknolojia Asus dia namoaka ny solosainany vaovao fa tsy latsaky ny anao Eee PC T101MT maro-touch netbook, izay mandimby ny T91MT. Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka an'ity solosaina ity dia ny fahaizan'ny fàfana amin'ny fàfana misy azy, izay tsy misy hafa fa ny multi-touch LED-backlit LED 10.1 santimetatra miaraka amin'ny famahana ny 1024 × 600.
Ity gadget vaovao ity dia manana processeur Intel Atom N450, fahatsiarovana 2GB ary kapila mafy 160GB / 320GB, fifandraisana. Bluetooth y Wifi 802.11b / g / n, ankoatry ny fananana fakan-tsary 0,3 mega pixel, mpandahateny ary mpamaky karatra MMC / SD izay manohana ny karatra SDXC. Ny bateria dia manana ora 6,5. Izy io dia miaraka amin'ny rafitra Windows 7 tafiditra, miampy mitondra / Home Basic, Home Premium. 1.3 kilao fotsiny ny lanjany.
Tsy mbola fantatra ny daty namoahana izany ho an'ny besinimaro na ny vidiny, saingy efa antenaina sahady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Asus Eee PC T101MT Multitouch